12/06/2013 09:00:00 AM political-news
12/06/2013 09:00:00 AM world-news
12/06/2013 08:59:00 AM political-news
12/06/2013 08:59:00 AM world-news
12/06/2013 08:41:00 AM learn-english
to wear off : တဖြည်းဖြည်းခြင်း ပျောက်ကွယ်သည်။
- My headache isn’t serious. It will wear off
ခေါင်းကိုက်တာက သိပ်မစိုးရိမ်ရပါဘူး၊ တစ်နာရီလောက်ဆို
ရင် တဖြည်းဖြည်း ပျောက်သွားမှာပါ။
- The effect of the painkilling drug didn’t wear
off for several hours.
အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးကြောင့် ခံစားနေရတာ နာရီပေါင်း
များစွာ ကြာအောင် မပျောက်နိုင်ဘူး။
to wear down : ပွန်းသွားသည်၊ ပါးသွားသည်၊ အားပျေ
If you drag your feet while you walk, you’ll
wear down your shoes quickly.
မင်းရှပ်တိုက်ပြီး လမ်းလျှောက်ရင်တော့ မင်းရှုးဖိနပ်က ခဏ
- The pounding of ocean waves against the coast
gradually wears it away.
လှိုင်းလုံးတွေက ကမ်းခြေကို ရိုက်ခတ်ပြီး တစ်ဖြည်းဖြည်း
on the whole : ယေဘုယျအားဖြင့်၊ အများအားဖြင့် (by
and large ဟုလည်းသုံးနိုင်သည်။)
- He is, on the whole,agood student.
ယေဘုယျအားဖြင့် သူက ကျောင်းသားကောင်း တစ်ယောက်
- By and large, I agree with your suggestions.
ယေဘုယျအားဖြင့်တော့ မင်းအကြံပေးတာကို ငါ သဘော
touch and go : အန္တရာယ်များသော၊ နောက်ဆုံးအထိ မေ
သချာသော risky, uncertain until the end
- The complicated medical operation was touch
and go for several hours.
ခက်ခဲရှုပ်ထွေးတဲ့ ဆေးပညာ ခွဲစိတ်မှုက နာရီပေါင်းများစြွာ
ကာအောင် အန္တရာယ်များ ခဲ့တယ်။
- The outcome of the soccer final was touch and
go for the entire match.
ဘောလုံးပြိုင်ပွဲရဲ့ နောက်ဆုံး ရလဒ်က ပွဲစဉ်တစ်ခုလုံးအတွ
ထိုင်းဘုရင်မင်းမြတ်၏ မွေးနေ့ပွဲအတွက် ဆန္ဒပြပွဲများကို ခဏရပ်ကာ မြို့တော် သန့်ရှင်းရေး ပူးပေါင်းဆောက်ရွက်
12/06/2013 08:41:00 AM world-news
နိုဝင်လာ ၄ရက်က ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အစိုးရကို ဆန့်ကျင့်ဆန္ဒပြသူများနှင့် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များသည် ဘုရင်၏ မွေးနေ့ အတွက် ကန့်ကွက်ပွဲကို
ခေတ္တရပ်ဆိုင်းကာ မြိုတော်၏ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းများကို ပူပေါင်းဆောင် ရွက်ခဲ့ကြ ကြောင်းသိရသည်။ ထိုင်းမှ ကန့်ကွက်ပွဲများကို ရဲတပ်ဖွဲ့က အကြမ်းနည်းဖြင့် ဖြိုခွင်းမှုအစား ပျော့ပြောင်းစွာ ပြောင်းလဲ ကိုင်တွယ်ရာမှ ဆန့်ကျင်ဘက် နှစ်ဘက်မှာ ယခုကဲ့သို့ အလွမ်းသင့်နေကြခြင်း ဖြစ်သည်။
ယနေ့တွင် ပြုလုပ်မည့် ထိုင်းဘုရင် Bhumibol Adulyadej၏ ၈၆နှစ်မြောက် မွေးနေ့အတွက် မြို့တော်အနှံ့မှ ၀န်ကြီးချုပ် ယင်းလက်ကို ဆန်ကျင့်သူများသည် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တစ်နေ့လုံး လမ်းမများတွင် ပြန့်ကျဲနေသည့် အမှိုက့များ၊ အုတ်ခဲအကျိုးအကြေများ၊ အစရှိသည်တိုို့ကို ဆေးကြောသန့်စင် ဖယ်ရှားပေးခဲ့သည်။ ထိုနေ့မတိုင်မီ သုံးရက်က ယင်းနေရာများတွင် ရဲများက မျက်ရည်ယိုဗုံးနှင့်ပစ်ခြင်း၊ မီးသတ်ပိုက်နှင့်ထိုးခြင်း၊ ကန့်ကွက်သူများဘက်က အုတ်ခဲနှင့် ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခြင်းတို့ကြောင့် ရှုတ်ပွနေခဲ့သည်။
ကန့်ကွက်ပွဲကို ဦးဆောင်သူများက ယင်းလက်အစိုးရကို ဖြုတ်ချရန်
ကြိုးပမ်းမှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဘုရင်မင်းမြတ်မွေးနေ့အတွက် ဆန်ကျင်ဘက်တို့နှင့် ပူးပေါင်းခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်းဆိုသည် ။
ထိုင်းနိုင်ငံ အမျိုးသား လုံခြုံရေးကောင်စီမှ အကြီးအကဲ ပါရာဒန် ပတ်တန်နက်နာဘက် ကလည်း ကန့်ကွက်သူများ ယခုကဲ့သို့ အစိုးရပိုင် အဆောက်အဦများအတွင်း စုဝေးနေခြင်း၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ရောထွေး
ဆက်ဆံနေ ကြခြင်းများအပေါ် စိုးရိမ်မှု တစ်စုံတရာ မရှိဟုဆိုသည်။ သူက ယနေ့ဖြစ်ရပ်ကို ကြည့်လျှင် လက်ရှိအစိုးရသည် အာဏာပိုင်
ဖြစ်နေသေးကြောင်း ပြသရာရောက်သလို ကန်ကွက်သူများ ကလည်း ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ရန် ကျန်သေးသည်ဟု ပြောပြနေသလိုပင်
ရန်ကုန်မြိုပြ အမွေအနှစ် ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဌ ဒေါက်တာသန့် မြင့်ဦး ကမ္ဘာထိပ်တန်း တွေးခေါ်သူများစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းခံရ
12/06/2013 08:32:00 AM Myanmar-news
ရန်ကုန်မြိုပြ အမွေအနှစ် ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့တည်ထောင်သူနှင့် ဥက္ကဌဖြစ်သူ ဒေါက်တာသန့် မြင့်ဦးသည် ကမ္ဘာထိပ်တန်း
မဂ္ဂဇင်းတစ်ခုဖြစ်သည့်Foregin Policy မှ၂၀၁၃ခုနစ်အတွက် ကမ္ဘာထိပ်တန်း တွေးခေါ်သူများစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းခံရကြောင်း
" ဒီလိုထည့်သွင်းခံရတာဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်း ရန်ကုန်မြိုပြအမွေအနှစ် ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ မှာရှိတဲ့
တစ်စုံတစ်ယောက်တိုင်းရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မူကို အသိမှတ်ပြုခံရတာဖြစ်သလို ရန်ကုန်မြိုပြစီမံခန့် ခွဲမူရဲ့ အရေးပါမူကိုလည်း
ထုတ်ဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်ဟာ နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်တွေနဲ့ ကြွယ်ဝချမ်းသာသူတွေအတွက် သာမက
မြိုတွင်းနေထိုင်သူတွေအတွက် အလှပဆုံးနဲ့ နေ့ ချင့်စဖွယ်အရှိဆုံး မြိုတော်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်" ဟု
ဒေါက်တာ သန့် မြင့်ဦးကပြောသည်။
Foregin Policy မဂ္ဂဇင်းသည် ကမ္ဘာထိပ်တန်း မဂ္ဂဇင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် အခြေစိုက်ကာ ကမ္ဘာထိပ်တန်းတွေးခေါ်သူများ စာရင်းအား ၂၀၀၅ခုနစ်မှစတင်ကာ နှစ်စဉ်ပြုစုထုတ်ပြန်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယခုနစ်ထုတ်ပြန်သော စာရင်းသည် ၁၀ကြိမ်မြောက်ထုတ်ပြန်ခြင်းကာ ယမန်ကထုတ်ပြန်သော စာရင်းဧ။် ထိပ်ဆုံးနေရာကို နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့ ကအတူပူးတွဲရရှိခဲ့ကြော်င်းသိရသည်။
ထို့ ပြင်ယခုနှစ်စာရင်းတွင် ရုရှားနိုင်ငံသမ္မတ ဗလာဒိမာပူတင်၊ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဖရန့် စစ်၊ ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် ရှင်ဇိုအာဘေးနှင့်
Amazon.com တည်ထောင်သူ ဂျက်ဖ်ဘီဇော့စ် တို့ လဲပါဝင်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ဒေါက်တာသန့် မြင့်ဦးသည် သမိုင်းပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ကာ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်သတ်သည့် စာအုပ်များစွာ ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့သူဖြစ်ပြီး ဟားဗတ်နှင့် ကိန်းဗရစ် တက္ကသိုလ်များတွင်သမိုင်းဘာသာသင် ဆရာတစ်ယောက်အဖြစ်တာဝန်
ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ ထို့ ပြင် ကမ္ဘာကုလသမ္မဂမဖွဲ့ ဧ။် အထွေထွေအတွ့င်းရေးမူးရုံးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့်အပြင်
ကုလသမဂအဖွဲ့ တွင် နိုင်ငံရေးရာဌာနဧ။် မူဝါဒ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဌာန အကြီးအကဲအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ယခုရန်ကုန်မြိုပြ အမွေအနှစ် ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ ဧ။်လုပ်ငန်းဆောင်တာများအပြင် မြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာနဧ။် အထူးအကြံပေးတာဝန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား စီးပွားရေးနှင့် လူမူရေးအကြံပေးကောင်စီတွင် အဖွဲ့ ဝင်အဖြစ် တာဝန်များထမ်းဆောင်လျှက် ရှိကြောင်းသိရသည်။